Azo atao ve ny manara-maso ny rakitra rehetra miaraka amin'i Google?
Araka ny fanao amin'ny fampiharana, tranonkala izay nanapa-kevitra ny hanakatona ireo mpitsabo tsy miankina SEO na antokon'olom-bitsy tsy misy fandefasana tsy fantatra, amin'ny ankapobeny dia miafara amin'ny fialan-tsasatra sy ny sazin'ny Google. Ireo mpampiasa tranonkala tsy manana traikefa dia matetika mampanantena ny mpanjifany ny fitomboana haingana ary hanangana rohy amin'ny fampiasana teknolojia spammy.
Ity lahatsoratra ity dia natokana ho amin'ny fanatsarana ny toeram-pivoarana izay omena amin'ny sehatra tsy miankina sy tsy miankina ary ny andraikitry ny backlinks ao anatin'ireny processus ireny.Ankoatra izany, hifanakalozanay hevitra ny mety ho fiantraikan'ny rindran-damina ratsy eo amin'ny sehatry ny sehatra sy ny lazanao.
Ahoana ny fomba fitadiavana backlinks ratsy?
Efa mba manontany tena ve ianao hoe ahoana no tsy maha-samihafa ny mombamomba azy ireo? Ny valiny marina amin'ity fanontaniana ity dia mametraka ny hatsaran'ny tranonkala iray napetrak'izy ireo. Azo jerena mora foana ny rindranasa mendrika. Na izany aza, indraindray ianao dia mila manao fikarohana momba ny tranonkala hahatakatra ny antony mahatonga ny rindran-damina miantraika amin'ny tranokalanao SEO.
Misy teknika ny fomba ahafahanao manavaka ireo lamandy avo lenta sy mahantra:
Ireo rohy amin'ny loharano izay vao nanomboka namorona backlinks
) Rehefa hita fa tsy maharesy lahatra ireo lahatsoratra izay napetraka ao amin'ny tranonkala iray ary tsy ampy ny fikarohana momba ny fikarohana, ny loharanon-tranonkala loharano dia afaka manisy rohy amin'ny tranonkala hafa. Raha tranonkala iray napetraka amin'ny tranokalan'ny votoatin'ny WordPress ary ampiasaina ny loha-hevitra TwentyEleven, dia mety ho marika kely amin'ny tranonkala kalitao ambany izy io izay noforonina miaraka amin'ny tanjon'ny fanondranana ny volanao.
Ireo rohy avy amin'ny fanehoan-kevitra avy amin'ny tranonkala hafa
Azo inoana fa hitanao ity endriky ny rohy ity eo amin'ny blôgy. Ireo programa izay mamorona backlinks dia mampiasa bots mba hametrahana fanehoan-kevitra hafa amin'ny tranonkala. Ireo fanehoan-kevitra ireo dia mibanjina araka ny natiora satria nanjary nahay ny rafi-pandam-pahalemana amin'izao androntsika izao. Ireo fanehoan-kevitry spam dia afaka maneho manokana sy mampiditra ny anarany. Tsy afaka mitondra sanda amin'ny rohy momba ny rohinao ny rohy momba ny spam.
Linkins izay voahodidin'ny kalitao ambany, dika mitovy
Raha ny mahazatra, ny loharanon-tranonkala izay noforonina tamin'ny tanjon'ny rohy misy ny rohy dia mamela afa-po izay tsy misy dikany na Ampitao tsotra fotsiny ny tranokala hafa. Misy sampan-draharahan'ny fanorenana tranonkala sasantsasany izay mamolavola manokana ireo tranonkala isaky ny manorina rohy eo amin'izy ireo ary manalavitra ireo rohy azo raisina ho an'ireo izay ilaina. Azo inoana fa hahita Google ao anatin'ny fotoana fohy ny Google ka hitady loharanom-baovao an'ireny tranonkala ireny. Ho vokatr'izany, hahazo loharanom-baova-tsolika hafa ho an'ny tranokalanao ianao.
Ahoana ny fomba hanarahana ny lalam-baingananao mendrika?
Nandritra ny fizarana teo aloha, dia niresaka momba ny fomba hanavahana rindran-damina marefo izahay. Ankehitriny, izao no fotoana handinihana ny fomba hanilihana ireo rohy ratsy ireo mba hisorohana ny fihenan'ny filaharana sy ny sazy Google.
Ny fomba tsotra indrindra dia ny mifandray amin'ny tompon'ilay tranonkala misy rohy manjavozavo ary mangataka azy hanala izany. Azo inoana fa hiatrika ny webmasters ianao izay mangataka anao handoa ny famindrana rohy. Amin'ity tranga ity, ny safidy tsara indrindra dia ny hanafoana ny rohy tsy ilaina amin'ny Google Link Disavow Tool raha toa ka tsy azo esorina izy ireo Source .